Nhau - Xiao Jie akaenda kuHaikou kunoongorora mabhizimusi epamusoro-soro epasirese
Xiao Jie akaenda kuHaikou kunoferefeta mabhizimusi epamusoro-soro epasirese
Mangwanani aNovember 27th, Xiao Jie, nhengo yeVakamira Komiti yeProvince Party Committee uye Gurukota reUnited Front Work department, vakaenda kuHaikou kunoongorora kuvakwa nekusimudzirwa kwemabhizimusi epamusoro-soro emakambani akazvimirira. Akasimbisa kukosha kwekuenderera mberi nekushandisa mweya weNational Private Economic United Front Work Conference, kuyedza kusimudzira nharaunda yebhizinesi, kutungamira mabhizinesi kuvandudza hupfumi, kugona uye kukwikwidza kwepakati kuburikidza nehunyanzvi hwehunyanzvi, uye kuita nhamburiko dzakabatana dzekubatsira kuvakwa kweHainan Mahara Ekutengesera Port. Mr. Xiao akaenda kuHainan Huayan Collagen Technology Co, Ltd. uye Hainan Yeguo Foods Co, Ltd., ndokuteerera mishumo yekuvakwa kwekambani nekusimudzira naVaGoo Hongxing naAmai Zhong Chunyan, vakuru vemakambani maviri, yakashanyira zvigadzirwa uye maR & D mashopu, ndokutaura nevashandi vekambani vakatarisana. Mweya weChishanu Plenary Session ye19th Central Committee yeCommunist Party yeChina, uye vakakurukura nekuchinjana nhaurirano pazvinhu zvinopisa uye zvakaoma izvo mabhizinesi ane hanya nazvo uye neHainan Free Trade Port.
VaXiao vakataura kuti Huayan Company neYeguo Company, seyenyika yepamusoro-soro bhizimusi rakazvimiririra rinobatanidza kutsvagisa chigadzirwa nekusimudzira, kugadzirwa, uye kutengesa, vane zvikamu zvebhizinesi, mamodheru ekushanda, marongero ekusimudzira, uye matekinoroji epakati eakazvimirira epfuma kodzero mukati. zvinoenderana nekuvandudzwa kweHainan Free Trade Port. Positioning, iyo tarisiro yakakura kwazvo. Huayan Kambani inoomerera zvisina tsarukano kuchinangwa "chekuzvipira kubhizimusi re collagen nekushandira hutano hwevanhu", ramba richiwedzera kudzamisa hupenyu hweHainan hwemugungwa nehove zviwanikwa, nekusimudzira kuenderera mberi kweiyo hogi collagen peptide indasitiri. Yeguo Kambani inofanirwa kupa yakazara mutambo kune iro basa reiye muvambi uye mutungamiri weye epamba coconut michero indasitiri, uye edza kuvaka iyo hombe nyanzvi kokonati mbishi zvigadzirwa zvigadzirwa bhizinesi muChina nepasirese. Akakurudzirawo makambani maviri kuti arambe achisimbisa chivimbo chavo mukusimudzira pasi pekuvakwa kweHainan Free Trade Port, nekusimudzira mweya wakasarudzika wemabhizimusi nehunyanzvi hwe "kuunza pamberi" uye "kushinga kutungamira nyika" ; kuomerera pane hunyowani uye kuenderera kunatsiridza Kukwikwidzana kweMusika uye chigadzirwa musimboti zvinhu, uchishandisa yemahara yekutengesa chiteshi senge chikuva uye chitubu chekuwana nzvimbo yakasimba, enda kune nyika, uye utsvage kukura kukuru; shandisa izvo "zviviri zvehutano" zvinodiwa, uye kusimudzira zvemabhizimusi pachezvako kukura zvine hutano.
VaXiao vakasimbisa kuti Hainan Free Trade Port ine zvayakanakira zvisingaenzaniswi maererano nenzvimbo dzekumisikidza, zvinangwa zvebudiriro, nemitemo mikuru. Kuvakwa kweFree Trade Port idanho rakanakisa revamabhizimusi vakazvimirira kutanga mabhizinesi avo. United Front Work department neFederal of Industry and Commerce pamatanho ese mudunhu, sevatungamiriri uye vanotungamira kusimudzira hupfumi hwenyika, vanofanirwa kudzidza, kushambadza, nekushandisa hurukuro yakakosha yaGeneral Secretary Xi Jinping nemweya we yeChishanu Plenary Session ye19th Central Committee seyakaitika uye yemberi nguva. Basa rekutanga rezvematongerwo enyika nderekuvaka masevhisi emakambani, kushambadzira uye kudzidzisa, uye kusimudzira kuitwa kwe "mapuratifomu matatu"; Izvo zvakakosha kuti uratidze kushandirapamwe kuitwa kweanokodzera marongedzero emakambani kuyamura, kusimbisa kupatsanura nhungamiro, uye kuita marongero anoenderana nemabhizinesi nemapaki; ramba uchishandisa izvo "zvikumbiro" "Kuburikidza nechitima", gadzira rondedzero yematambudziko emakambani, uye shandisa marongero kusimudzira mhinduro yematambudziko emakambani; isu tinofanirwa kupa kutamba kuzere kune zvakanakira chimiro chitsva cheyakabatana basa repamberi uye tinzwisise "zvishanu mashandiro", ndiko kuti, kuita kuronga, kuita marongero, kuita zvirongwa, kuita mabasa, kuita manejimendi, kupa docking yesangano uye garandi yebasa mabhizinesi akazvimirira ekupinda, kuisa mari nekuvaka muHainan, uye pamwe chete kugadzira bhizinesi nharaunda inoenderana nekusimudzira hutano hwehupfumi hwega.
Kang Baiying, Executive Mutevedzeri Gurukota reUnited Front Work department reProvince Party Committee; Chen Jianjiao, Mutevedzeri wegurukota uye Mutungamiriri weProvince Overseas Chinese Nyaya Yehofisi; Wang Sheng, Yakazara-nguva Mutevedzeri Wachigaro weProvince Federation yeindasitiri uye Zvekutengeserana; Zheng Boyan, Nhengo yeDare Rakamira reHaikou Municipal Party Committee uye Gurukota reiyo。